के तपाईँ रुघा खोकीले ग्रस्त हुनुहुन्छ ? निको पार्न अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपचार विधि « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
के तपाईँ रुघा खोकीले ग्रस्त हुनुहुन्छ ? निको पार्न अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपचार विधि
यी समयमा मौसम बदलिने, हावा चल्ने हुँदा, रुघा खोकीको समस्याले सताउने गर्छ। रुघा खोकीलाई सामान्य मान्ने गरिएता पनि यसले दैनिक जीवनलाई असहज बनाइदिन्छ, शरीर शिथिल बनाइदिन्छ र अरु रोगहरु समेत निम्त्याउन सक्छ।
रुघा खोकीले ग्रस्त पार्न थालेपछि हामीले मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खाने गर्छौं, जसले शरीरमा बेफाइदा समेत गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँ केही त्यस्ता घरेलु उपचार विधि बारे चर्चा गरिएको छ, जसले तपाईंको समस्यालाई, तपाईंको शरीरलाई केही नोक्सान नगर्ने गरि निको पारिदिन सक्छन् ।
चार वटा ल्वाङ्गलाई पानीमा उमालेर दैनिक दुई पटक पिउनालॆ खोकी निको हुन्छ । यसरि पिउँदा पानी चिसो भइसकेको हुनु हुँदैन । ल्वाङ्गले सम्पूर्ण मुखको उपचार गर्ने हुँदा, यो खोकी मात्र नभएर, दांत, गिजा लगायत मुख सम्बन्धि अन्य बिमारीका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। बेसार, थोरै घिऊ र मह मिलाएर खानाले पनि रुघाखोकी निको हुन्छ । यो खाएपछि दुई घण्टासम्म पानी पिउनु हुँदैन ।